Petition · Petition: Free Aung Naing Soe, Mok Choy Lin, Lau Hon Meng & Hla Tin ! · Change.org
Free Aung Naing Soe started this petition to Chief Justice of Myanmar U Htun Htun Oo and5others
၁။ ဦးထွန်းထွန်းဦး ၄။ ဦးဇော်ဝင်းထူး
ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် တရားသူကြီး
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ဇမ္ဗူ သီရိမြို့ နယ် တရားရုံး
၂။ ဒုရဲချုပ် အောင်ဝင်းဦး ၅။ ဦးဖြိုးဇေယျာသော်
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
၃။ ဦးဝင်းကြွယ် ၆။ အငြင်းပွားမှုနှင့်တိုင်ကြားမှုများ
1. U Htun Htun Oo 4. U Zaw Win Htoo
Chief Justice of the Union Judge
Supreme Court of the Union Zabuthiri Township Court
2. Brig-Gen Aung Win Oo 5. U Phyo Zeya Thaw
Acting Police Chief Phyithu Hluttaw MP
Myanmar Police Force Zabuthiri Constituency
3. U Win Kyway 6. Complaints Commission
District Court Judge Myanmar Press Council
Dekkhina District Court
ရက်စွဲ။ ။ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၇
အကြောင်းအရာ။ ။ကိုအောင်နိုင်စိုး၊ ဦးလှတင်၊ Mok Choy Lin နှင့် Lau Hon Meng တို့အား လေယာဉ်ပျံသန်းမှုအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀ အရ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရာမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါရန်နှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ အရ ဆွဲချက်တင်ထားရာမှ တရားသေလွှတ်ပေးပါရန် တင်လျှောက်ခြင်း
Re: A Call for Exoneration of Aung Naing Soe, Mok Choy Lin, Lau Hon Meng and Hla Tin
၁။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် သောကြာနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား သတင်းထောက် ကိုအောင်နိုင်စိုး၊ ကားမောင်းသူ ဦးလှတင်၊ မလေးရှားနိုင်ငံသား သတင်းထောက် Mok Choy Lin နှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသား သတင်းထောက် Lau Hon Meng တို့အား TRT World သတင်းဋ္ဌာန၏ စင်္ကာပူဋ္ဌာနခွဲအတွက် နေပြည်တော်မြို့ ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံအား မှတ်တမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးလိုသဖြင့် အဆောက်အအုံအနီး၌ Drone ယာဉ်လွှတ်တင်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် လှည့်ကင်းအဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံအား Drone ဖြင့်ဗီဒီယိုရိုက်သည်ဆို၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်။ ကိုအောင်နိုင်စိုး၊ ဦးလှတင်၊ Mok Choy Lin နှင့် Lau Hon Meng တို့မှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစီအစဉ်ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနအား မရိုက်ကူးခင် ကြိုတင်အသိပေးထားသည့်ကြားမှ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
1. On October 27, 2017 (Friday), Myanmar interpreter Aung Naing Soe, Malaysian journalist Mok Choy Lin, Singaporean camera person Lau Hon Meng, and their driver Hla Tin (alsoaMyanmar national) were detained byapolice patrol in Nay Pyi Daw for filming Hluttaw building withadrone withoutapermit while they were preparing capture aerial footages of the structure foradocumentary assigned by TRT World. The arrested was made after the filming schedule was informed to Ministry of Information.
၂။ ၎င်းအပြင် အဆိုပါ သောကြာနေ့ညနေတွင် ကိုအောင်နိုင်စိုး၏နေအိမ်ကို ရဲဘက်အရာရှိများနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်များက ၀ရမ်းမပါပဲ ၀င်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြပြီး ကိုအောင်နိုင်စိုးပိုင်ဆိုင်သော Memory Stick များကို ရယူသိမ်းဆည်းခဲ့ပါသည်။
2. On the same day, police officers and members of township general administration department searched Aung Naing Soe's home withoutasearch warrant and confiscated memory sticks.
၃။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးအား ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ Drone တင်သွင်းမှုဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားသည်ဟု သိရပြီး၊ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ ၌ ဇမ္ဗူသီရိတရားရုံး၌ ၎င်းတို့လေးဦးအား ပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေး၍ Drone လွှတ်တင်ရန်ကြိုးစားမှု­­­­ဖြင့် တရားရုံးမှ ၁၉၃၄ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေဖြင့်ဆွဲချက်တင်ကာ ထောင်ဒဏ်နှစ်လ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေအရ စီရင်ခြင်းခံရပါက ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်အထိ ကျခံရဖွယ် ရှိပါသည်။
3. The team has been charged for importingadrone without permission under Section 8 of the Export and Import Law. They were also charged under 1934 Aircraft Act and tried for the first time on November 10, 2017 at Zabuthiri township court for attempting to flyadrone and were givenatwo month sentence each. They can face up to additional sentence of three years each if convicted under the Export and Import Law.
၄။ အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရစဉ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တုိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် ကိုအောင်နိုင်စိုးအား ARSA အဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဟု လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ပြန့်နှံ့ နေသော အခြေအမြစ်မရှိ၍ ကာယကံရှင်၏ဂုဏ်သရေအားထိခိုက်စေသော ကောလဟာလများကို စေ့ငှလုံလောက်စွာ စုံစမ်းခြင်း၊ ကာယကံရှင်၏ ဂုဏ်သိက္ခာအား ထိခိုက်စေနိုင်သည်မှာ သိသာထင်ရှားသော်လည်း ငှဲ့ကွက်ခြင်း မရှိပဲ သတင်းမီဒီယာသမားများ ဖြစ်ကြသော နေရိုင်း နှင့် ဇေယျာထွန်းတို့မှ မီဒီယာဥပဒေ အခန်း(၄)၊ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) (ဆ) (ဇ) ပါ "သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦး၏ တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများ" ကို ချိုးဖောက်၍ "လွှတ်တော်ကျင်းပနေစဉ် ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ Drone ဖြင့် မှတ်တမ်းယူနေသည့် ပြည်ပသတင်းထောက်များ အပါအ၀င် လေးဦးအား ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်" ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် “ရဲတပ်ဖွဲ့၏ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှု ခံနေရသူမျာထဲတွင် တစ်ဦးမှာ ဘင်္ဂါလီ ARSA အကြမ်းဖက် ခေါင်းဆောင်နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဓါတ်ပုံအချို့နှင့်အတူ လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော်လည်း ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာက အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိချေ” ဟုတာဝန်မဲ့စွာ ရေးသားခဲ့ပြီး Eleven Media Group မှ ကျင့်ဝတ်မဲ့စွာ news-eleven.com ၀က်ဘ်ဆိုက် (http://news-eleven.com/headline/18850 တွင်လည်းကောင်း Eleven Media Group ၏ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွင်လည်းကောင်း ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရေးသားမှုကို အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖြုတ်သိမ်းသွားခဲ့သော်လည်း Screen Shot (http://fam.ag/2yBpDRP ရယူထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ကျင့်ဝတ်မဲ့စွာ ရေးသားဖော်ပြမှုကြောင့် ကိုအောင်နိုင်စိုးနှင့် ၎င်း၏မိသားစုဝင်များမှာ များစွာထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။
4. Moreover, On October 27, 2017, Ne Rai and Zeya Tun, without thorough investigation and consideration for reputation of Aung Naing Soe, irresponsibly penned an article titled "Charges Pressed Against Four Including Foreign Journalists Filming withaDrone Under Import Export Law" and Eleven Media unethically published the article on their website, news-eleven.com, and the Facebook page (http://news-eleven.com/headline/18850 The article mentioned about baseless and damaging rumours spreading on social media that Ko Aung Naing Soe has links to ARSA inaparagraph which reads, “Words have been spreading with images on social media that one among those being questioned by the police force could have links to ARSA chief but the authorities have not made any statement on the details." This violates “responsibilities and codes of conducts to be complied by news media workers” stated in section 9, subsection (a), (g), and (h) of the Media Law. This part was removed from the website on October 28th but screenshots of the original article were captured (http://fam.ag/2yBpDRP Ko Aung Naing Soe and his family could suffer many losses for this.
၅။ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၈) ပုဒ်မ ၃၄၇ တွင် " နိုင်ငံတော်သည် မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရရှိစေရမည်။ ထို့အပြင် ဥပဒေ၏အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီမျှစွာ ရယူပိုင်ခွင့်ပေးရမည်။" ဟုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၃၅၃ တွင် "မည်သူ့ကိုမျှ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီမှတစ်ပါး အသက်ကိုဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်စေ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရ။" ဟုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၃၅၇တွင် "ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်မဆန့်ကျင်လျှင် နိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံသားများ၏ နေအိမ်ဥပစာ လုံခြုံမှု၊ ပစ္စည်းလုံခြုံမှု၊ စာပေးစာယူနှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုများအတွက် ဥပဒေအရ အကာကွယ်ပေးရမည်။" ဟုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၃၇၃တွင် “ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ မည်သူ့ကိုမဆို ယင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သည့်အချိန်က အတည်ဖြစ်လျက်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရသာ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ရမည်။” ဟုလည်းကောင်း အသီးသီး ပါရှိပါသည်။
5. According to Article 347 of Constitution of the Republic of Union of Myanmar, "the Union shall guarantee any person to enjoy equal rights before the law and shall equally provide legal protection", whereas Article 353 states, "Nothing shall, except in accord with existing aw, be detrimental to the life and personal freedom of any person", whereas it is stated in Article 357 that "the Union shall protect the privacy and security of home, property, correspondence and other communications of citizens under the law subject to the provisions of this Constitution", and in Article 373 that "any person who committedacrime, shall be convicted only in accord with the relevant law then in operation."
၆။ ကိုအောင်နိုင်စိုးသည် နိုင်ငံခြားသားသတင်းထောက်နှစ်ဦးအား စကားပြန်အဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေစဉ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဦးလှတင်သည် ၎င်းတို့အား ကားလိုက်ပါမောင်းနှင် ပေးနေစဉ်လည်းကောင်း အသီးသီးအဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ Drone ပုိုင်ဆိုင်မှုနှင့်လည်းကောင်း၊ တင်သွင်းမှုနှင့်လည်းကောင်း မည်သို့မျှပတ်သက် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။
6. Aung Naing Soe and Hla Tin were respectively arrested while they were accompanying two foreign journalists as an interpreter and as the driver of the production vehicle. They have nothing to do with possession or importing of the drone.
၇။ ၁၉၃၄ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၁၈ သည် သဘောရိုးဖြင့် ပြုလုပ်သူ သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ရန် ကြံစည်သူများကို ၎င်းဥပဒေ မသက်ရောက်စေရဟု အဓိပ္ဗါယ် သက်ရောက်ပါသည်။ ကိုအောင်နိုင်စိုး၊ Mok Choy Lin၊ Lau Hon Meng နှင့် ဦးလှတင်တို့သည် လွှတ်တော်အဆောက်အအုံအနီးတွင် Drone လွှတ်တင်မှုမှာ ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းကြောင်း မသိနားမလည်၍ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ ဖြစ်သဖြင့် ပုဒ်မ ၁၈ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် အကျုံးဝင်ပါသဖြင့် ၎င်းတို့အား ထောင်ဒဏ်နှစ်လ စီရင်ချက်ချခြင်းသည် လေယာဉ်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်လျက်ရှိပါသည်။
7. Section 18 of 1934 Aircraft Act suggests, "No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done ..." under the act. Aung Naing Soe, Mok Choy Lin, Lau Hon Meng and Hla Tin are first offenders who were unaware that operatingadrone near the Hluttaw building withoutapermit is illegal. Thus, they were acting out of good faith and it is against 1934 Aircraft Act and Article 373 of the Constitution to sentence the four to two months in prison.
၈။ ထုို့အပြင် ၁၉၃၄ အက်ဥပဒေ နှင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်ကို စွဲချက်တင်ခံထားရသူများအားလည်းကောင်း ၎င်းတို့၏ရှေ့နေများနှင့် မိသားစုဝင်များအားလည်းကာင်း ကြိုတင်အသိပေးထားခြင်းမရှိပဲ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အမှုရင်ဆိုင်ရန် ဇမ္ဗူသီရိတရားရုံးသို့ ရောက်ရှိမှသာ ၎င်းဥပဒေနှင့် စွဲချက်တင်ထားသည်ကို သိခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသူများ အနေနှင့်လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့၏ရှေ့နေများအနေနှင့်လည်းကောင်း စွဲချက်တင်ထားသောအမှုအား တရားခွင်တွင်ရင်ဆိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန် လုံလောက်စွာ မရရှိခဲ့ပါ။
8. Moreover, neither the quartet, their attorneys nor their families were informed that they were charged under 1934 Aircraft Act, and were unaware of the charge until they attended the trial at Zabuthiri court. The defendants and their attorneys thus did not have sufficient time to prepare to face the charges at the court.
၉။ သို့ဖြစ်ပါ၍ Mok Choy Lin နှင့် Lau Hon Meng တို့အား လေယာဉ်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀ အရ ပြစ်မှုကျခံနေရာမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါရန်၊ Drone တင်သွင်းရာတွင် မည်သို့မျှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော ကိုအောင်နိုင်စိုး နှင့် ဦးလှတင်တို့အား နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၇၊ ပုဒ်မ ၃၅၃၊ ပုဒ်မ ၃၅၇ နှင့် ပုဒ်မ ၃၇၃ တို့တွင်ဖော်ပြပါရှိသော နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာသောအားဖြင့် လေယာဉ်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀ အရ ပြစ်မှုကျခံနေရာမှ တရားသေလွတ်မြောက်ခွင့်ပေး၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ အရစွဲချက်တင်ခံထားရခြင်းမှ တရားသေလွှတ်ပေးပါရန်နှင့် နေရိုင်း၊ ဇေယျာထွန်းနှင့် Eleven Media Group တို့အား သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦး၏ တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် လေးစားစွာတင်လျှောက်အပ်ပါသည်။
9. Therefore, we respectfully call for exoneration of Aung Naing Soe and Hla Tin from the charges held under Section 10 of Aircraft Act and Section 8 of Export and Import Law with respect to the citizenship rights prescribed in Article 347, 353, 357 and 373 of the Constitution; discharge of Mok Choy Lin and Lau Hon Meng from the two month sentence under Section 10 of 1934 Aircraft Act; and appropriate action against Ne Rai, Zeya Tun and Eleven Media Group for violation of the responsibilities and codes of conducts of news media workers.
နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို လေးစားကာကွယ်မှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို လိုလားသူပြည်သူများကိုယ်စား
On behalf of the members of the public who desire respect and protection of citizen rights and rule of law,
၁။ နေပြည်တော်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
၂။ ဒက္ခိဏခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
၃။ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး
၄။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
Pyithu Hluttaw MP, Mingalar Taung Nyunt Constituency
Commander of Nay Pyi Daw Region Police Force
Commander of Dekkhina District Police Force
Commander of Zabuthiri Township Police Force
Free Aung Naing Soe Page Admins
Photo: A Screencapture of TRT World's Broadcast of the Arrest
Petition: Free Aung Naing Soe, Mok Choy Lin, Lau Hon Meng & Hla Tin !
Today: Free Aung Naing Soe is counting on you
Free Aung Naing Soe needs your help with “Petition: Free Aung Naing Soe, Mok Choy Lin, Lau Hon Meng & Hla Tin !”. Join Free Aung Naing Soe and 3,217 supporters today.